Ellicott Dredge dia mameno ny tetik'asa famerenana amin'ny morontsiraka - Ellicott Dredges
Grand Popo, Bénin: Ny minisiteran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra dia nanolotra fifanarahana, novatsian'ny Banky Iraisam-pirenena, tany amin'ny kontinanta dredging avy any Afrika Andrefana. Logistika sy fanampiana SA. hanesorana sedra 100,000 XNUMX metatra toradroa avy amin'ny reniranon'i Mono any Grand Popo, Benin.
The Banky iraisam-pirenena nankatoavin'ny famatsiam-bola $ 210 tapitrisa ho famatsiam-bola hananganana tetikasa isam-paritra fantatra amin'ny faritra West Africa Coastal Areas (WACA) Programme Investment Investment. Ny programa dia natao hiarovana amin'ny fitrandrahana amorontsiraka amin'ny alàlan'ny hetsika marobe mamerina ny lemaka, mamelona torapasika ary manamboatra ranomasina.
Grand Popo, fantatra amin'ny hoe jono mpanjono malaza tondra-drano noho ny morontsiraka tsy nivoatra sy niova toetr'andro. Ny famatsiam-bolan'ny programa dia miantoka ny vidin'ny famerenana ny renirano ho an'ireo mponina izay miankina amin'ny androm-piainany Reniranon'i Mono ho loharanon-tsakafo, fivelomana ary sakafo mahavelona.
Logistics sy fanampiana SA dia nampiasa an Dragon Ellicott 370® Dredge hamita ilay tetikasa amin'ny famerenana ny renirano Mono lavitry ny lalana tsy lavitra izay mandeha ny fotoana mba hisorohana ny tondra-drano amin'ny ho avy.